Bhala kwiNdunankulu yeKhanada
Imiba Urhulumente waseKhanada
Indlela yokuqhagamshelana noMphathiswa weCanada
by USusan Munroe
Idilesi, iWebhusayithi kunye neNkcukacha zeFowuni
Ngokutsho kwe-Ofisi kaNdunankulu: INkulumbuso ixabisa kakhulu iingcinga kunye namacebiso aseKhanadi. AmaKhandi angathumela ileta okanye umbuzo kwi-intanethi, thumela i-imeyile, uthumele ileta ngeposi, ngefeksi okanye ubize i-Ofisi kaNdunankulu.
80 Street Street
E-Ottawa, kwi-K1A 0A2
Isicelo sokuzalwa okanye Isikhumbuzo
I-Canada inokwenza isicelo kwi-intanethi yosuku lokuzalwa, umtshato wonyaka okanye ubumbano wokubingelelana kwi-prime minister, kwakhona oku kuya kwenziwa ngeposi okanye ngefeksi.
I-prime minister ithumela izatifikethi zovuyo kubantu baseKhanadi bhiyozela ukuzalwa okubalulekileyo, njengokuzalwa kwama-65 kunye nokuphakama, kwiminyaka emi-5, kunye neentsuku zokuzalwa eziyi-100 kunye. UNdunankulu uthumela izatifikethi zokuvuyiswa kubahlali baseKhanadi bhiyozela imikhosi ebalulekileyo yomtshato okanye isiganeko sokubambisana ngokubambisana kunye nemibutho yabasebenzi kwiminyaka eyi-25 kunye nokuphakama, kwiminyaka emi-5.
Izipho zoMphathiswa kunye neNtsapho
Abaninzi baseCanada bakhetha ukunikela izipho kwinqununu kunye nosapho. I-Ofisi yeNdunankulu ibona njengolu hlobo "luthando kunye nobubele." Imigaqo yoKhuseleko kunye noMthetho we-Accountability Act owenziwe ngo-2006 ukukhusela nokunqanda inkulumbuso kunye nentsapho ekuwamkeleleni izipho ezininzi. Zonke izipho zemali neziqinisekiso zesipho ziya kubuyiselwa kumthumeli. Ezinye izinto, ezinjengezinto ezibhubhisayo, azikwazi ukuvunyelwa ngenxa yezizathu zokhuseleko.
Imigaqo yomshuwalense weNgqesho yaseKhanada
Ukuqonda Ukulawulwa Kwebhanki eKhanada
UNdunankulu uJoe Clark
Biography ka Michaëlle Jean
Izifinyezo zePhondo kunye namacandelo eCanada
URhulumente wePalamente usebenza njani?
Iimpawu zePhondo zeenyoni zeCanada
UNdunankulu uJohn Turner
UNdunankulu uLouis St. Laurent
Iidolophu ezinkulu zeCanada
Indlela yokufaka isicelo sePension yaseKhanada yoKhuseleko lwabantu abadala
Izizathu 4 Ufanele uthathe i-SAT
Umoya owawusombulula ukubulala kwakhe
INkundla ePhakamileyo yeeNkohlakalo
Ubani AbayiVi Viet Minh?
Iimpawu eziNtsundu okanye iiLayini zeLayini zithetha ntoni kwiKlasi yeGalofu?
Indlela yokuchonga iiNgxelo zangaphambili
LandRoller Terra Inline Skate Recreation
Ukuqonda xa ufuna ukusebenzisa "Pendant un An" okanye "Phala un An"
I-Orleans Jazz Fest 2016 Isikhokelo
Iyiphi Indawo yokubilisa yobisi?
University of Montana State University
Indlela yokwenza iprojekthi ye-Multivariate Econometrics ye-Painlessless
Ukwahlula kweCawa noRhulumente
Indlela yokufumana iingxaki kwi-Revolver; Uhlolo luyakwazi ukukuxelela ukuba Kutheni i-Gun yakho iVukile
Imithi kaRhulumente waseMerika
Ukubhukuda Iibhobho eziphambili Musa ukuhambisa amanzi echibini
Masidlale i-Kit yokuThengisa: i-Free Printable ye-Pretend Play ne-Learning
IiNcwadi eziPhathelene neNkcazo
I-Cempoala - iTotonac Capital kunye no-Ally kaHernan Cortes
I-Bhumis yeBhumi yeBuddhism
Ikhalenda yamaKatolika yeLaturgical for Lent